Archive du 01-mars-2022
Mpitondra fanjakana Mifankahafantatra dosie ka tsy sahy mifamely
Mangina tanteraka ny tohin’ireo dosie goavana nahasaringotra olona ambony, izay nivadika ho raharaham-panjakana.
Manomboka mitsioka eto amin’ny tanintsika ny rivotra politika iraisam-pirenena eo anatrehan’ny ady manahirana ireo firenen-dehibe.
UKRAINE SY RUSSIE MBOLA HO HENJANA NY ADIHEVITRA
Nanomboka omaly tany Bielorrussie tany amin’ny sisin-tany manasakara azy amin’i Ukraine ny fifampiresahana mikasika ny ady any Ukraine.
Ampamoakan’i Fanirisoa Ernaivo “Volamena 40kg indray no tonga any Dubaï “
Ankoatra ilay volamena 2,2 kg tratra tany Kaomoro tamin’ny herinandro ambony, dia nisy volamenanivoaka tany Dubaï ny zoma 18 febroary, hoy ny ampamoakan’i Fanirisoa Ernaivo omaly.
Fidorohana eto an-drenivohitra Mahalafo heroine 30 fonosana isan’andro ny mpamatsy iray
Tena miparitaka ny zava-mahadomelina mahery vaika heroine eto an-drenivohitra. Raha araka ny fanadihadiana natao tamina lehilahy iray 44 taona mpamatsy izany , monina eny Antohmadinika ,
Masoivoho Rosianina eto Madagasikara Miezaka mamafa ny fanaratsiana ataon’ny Tandrefana
Namoaka fampitam-baovao ny Masoivohon’ny Federasionina Russie eto Madagasikara Andrey Andreev omaly, fa nisy ny fihaonany tamin’ny Minisitry ny raharaham-bahiny sady Lehiben’ny Diplaomasia Malagasy Patrick Rajoelina.
Traboina teny Atsimondrano Adino tamin’ny fizarana Vatsy Tsinjo ?
Raha nahoraka be teo aloha teo ny fizarana fanampiana “Vatsy Tsinjo” ho an’ireo traboina teto an-drenivohitra vokatry ny fandalovan’ny rivo-doza Batsirai dia mbola tsy nahazo ny anjarany kosa ny teny amin’ny distrikan’Atsimondrano
Depiote Fetra “Tsy nijery lavitra ny fitondrana”
Aleo tsy miteny aloha ny firenena malagasy, hoy ny filohan’ny parlemanta Tiako I Madagasikara, ny depiote Fetra Ralambozafimbololona, raha ny mikasika ny ady ifanandrinan’I Rosia sy Okrainina, satria tsy zakan’ny traikefan’ny fitondram-panjakana izany.
Miarinarivo Itasy Vehivavy 10 naolan’ilay lehilahy, maty avokoa ny 4
Tsy hay intsony na midoroka zava-mahadomelina na manao zavatra hafa ity lehilahy iray 49 taona monina any amin’iny faritra Miarinarivo Itasy iny.
Raharaha Ukraine - Russie Mangina ny mpitondra sy ny politisianina
Samy mangina na ny mpitondra na ny mpanao politika malagasy manoloana ny ady any Ukraine. Mitandrina mafy satria tsy teo ho ratsy eo amin’ny andaniny sy ny ankilany dia ny Rosanina
Hotely anaty rano etsy Andranotapahana Efa ho 4 taona izao tsy nahitana taratasy fahazoan-dalana
Ahitana trano iray miorina anaty rano ao anatin’ny farihin’Andranotapahana efa ho 4 taona izao. An-kavanan-dalana izy io raha hiakatra ho any Ambohidratrimo.
Antoko politika madio “Ampodio ireo Malagasy any Okrainina”
Manoloana ny ady mitranga any Okrainina, Rosia sy ny vondrona OTAN, dia mitondra ireto fanehoan-kevitra ireto izahay Antoko Politika Madio na APM,
TAXIBE Efa manomboka miverina ilay toerana 5
Raha mbola tsy foana tanteraka fa mbola namono olona 16 isa tamin’ny faran’ny herinandro teo ilay valan’aretina Covid 19 teto amintsika dia efa marobe sahady ireo tsy mivaky loha intsony ny amin’ny fiarovan-tena tokony hataony.
Fitaterana fanampiana ho an’ny traboina Nanetsika ny tafika FAZSOI ny Frantsay
Nanetsika ny andian-tafika FAZSOI (Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien) nitondra tohana sy fanampiana vokatry ny fiantraikan’ny rivodoza,
Raiamandreny ara-drazana Tsy maintsy tafita Madagasikara
Madagasikara no firenena voalohany tokony hanan-karena indrindra raha manaja ny fahendrena sy ny soatoavina Malagasy ny tsirairay ka tsy manao tsinontsinona sy mamingavinga izany mba hanotana fady.